Isimemezelo semali eyengeziwe | Ezezimali Zomnotho
Lapho abantu bezokwenza i- ukubuyiswa kwentela yemali engenayoEzikhathini eziningi, benza amaphutha (ikakhulukazi uma bewethula izikhathi ezimbalwa zokuqala) ngenxa yokuntula ukwenza noma ukungazi nje. Uma sibhekene nalolu hlobo lwenkinga phambilini, akushoyo asibuze ukuthi senze i- isitatimende semali engenayo, ukuze idatha esiyibeke kabi ingalungiswa nokuthi izibalo ziqonde ngqo.
Isitatimende semali eyengeziwe isitatimende esilungisa lesi sangempela.
1 Yini okufanele ikhonjiswe ezitatimendeni zemiholo ezihambisanayo
2 Obani abagunyaziwe ukufaka amafomu entela engeziwe
3 Izinhlobo zezitatimende ezengeziwe
4 Uma isimemezelo sikhishiwe
5 Uma ingakhokhiwe esikhathini esibekiwe
6 Ukuguqulwa kwedatha okuhlobene nokunqunywa kwentela noma ukukhokha
7 Zingaki izimemezelo ezengeziwe ezingenziwa?
8 Ngabe izimemezelo ezihambisanayo ziveza imbuyiselo?
9 Inkokhelo Entsha Ebhekiselwe Yokuncoma Okuhambisanayo
Yini okufanele ikhonjiswe ezitatimendeni zemiholo ezihambisanayo
Ukwenza isimemezelo sokungezelela, izidingo eziyisisekelo kufanele zifake inombolo yokuthengiselana noma inombolo yeposi eyabelwe yona, ngaphezu kosuku lapho imibhalo ezokwengezwa yethulwa khona.
Izithasiselo abazokwengezwa ngazo nazo kufanele zifakwe, kubandakanya nemininingwane ezolungiswa. Kufanele futhi ufake konke Imininingwane yomuntu uzokwenzenjani isitatimende nesifinyezo kwesengezo sifakiwe.
Injani i- izitatimende ezengeziwe ngokwesimo ngasinye
Ngenhloso yokufaka amafomu okubuyiswa okungeziwe ngezinketho ze “ukuguqulwa kwezimemezelo""isimemezelo siyize"Noma"ukubuya akufakwanga”Lokhu okulandelayo kumele kwenziwe:
Ukuguqulwa kwezimemezelo. Kulokhu, kufanele ihanjiswe ukuze kuguqulwe imininingwane esitatimendeni esivele ifakiwe, noma ukufaka umbuso noma isibopho esitatimendeni leso.
Isimemezelo ngaphandle komthelela wesimemezelo. Le nketho isetshenziselwa ukususa yonke imbuyiselo esivele siyifakile noma imbuyiselo engaphezu kweyodwa.
Isimemezelo asifakwanga. Le nketho ingabekwa ngendlela eyingqayizivele lapho umuntu oyethula, esesichithile isimemezelo esedlule noma izitatimende.
Izimemezelo zangaphambilini ze-schema. Kulokhu, izimbuyiselo ezingezekile zingafakwa ukuze kulungiswe imbuyiselo ejwayelekile yangaphambilini noma kulungiswe nembuyiselo eyengeziwe.
Obani abagunyaziwe ukufaka amafomu entela engeziwe
Izimemezelo ezihambisanayo ngombono. Uma kwenzeka kwenziwa ngemuva kombono wentela ingxenye eyodwa noma eziningi zesimemezelo esivele siveziwe kumele zilungiswe.
Kuyahambisana nokulungiswa kwezimali. Lokhu kwenzeka lapho isiphathimandla sentela senza ukuqinisekiswa kwembuyiselo futhi umkhokhi ubophezelekile ukushintsha imbuyiselo ngesikhathi sokubukeza esishiwoyo.
Izinhlobo zezitatimende ezengeziwe
Ngaphakathi izitatimende ezengeziwe, kunezinhlobo ezi-4 ezingenziwa, kuya ngohlobo lwedatha okufanele ilungiswe.
Izimemezelo ezilungile zamaphutha ajwayelekile
Lesi simemezelo esingeziwe kufanele senziwe lapho okuthile obekufanele kumenyezelwe kuyekisiwe, lapho inkokhelo ingakenziwa ngaphakathi kosuku olukhonjisiwe noma lapho imininingwane ehlobene nezinkokhelo noma intela izoshintshwa.
Ukuze ukhiphe lokhu isitatimende esingezelelayo ngendlela efanele, okufanele kwenziwe yilokhu okulandelayo:
Faka iwebhusayithi ye-hacienda bese ukhetha inketho yenqubo. Ngemuva kwalokho kufanele siye endaweni yesimemezelo. Lapho usufikile, kufanele ukhethe inkokhelo ebaluliwe bese ufaka ifayela le- iphasiwedi yomuntu siqu ye-akhawunti ye-hacienda ne-RFC.
Ngemuva kwalokho kufanele ukhethe ukwethulwa kwesimemezelo bese usinikeza ukuhambisana. Manje usungakhetha iphutha ofuna ukulilungisa embuyisweni yakho bese ulithumela emuva kuMgcinimafa ukuze bakwazi ukubuyekeza ukubuya kwakho. Uma sekuqinisekisiwe, bazokwazi ukuxhumana nawe ngendlela efanayo futhi Bazokuthumela incwadi yokuvuma ukuthi bayitholile.
Uma isimemezelo sikhishiwe
Uma kwenzeka isimemezelo sikhishiwe, kufanele ufake inkokhelo ebaluliwe bese ukhetha inketho yokufaka i-Return. Kufanele ubeke usuku obekufanele umemezele ngalo kanye nohlobo lwesimemezelo sokuthi lukhona (kulokhu kumele kumakwe njengesimemezelo esihambisanayo). Bese uchofoza kunketho Yesibopho esingavezwanga.
Okwamanje, izibopho ezethulwe zizovela esikrinini sakho, kanye nezintela. Kufanele ukhethe ukuthi yiziphi ofuna ukuzethula.
Kumele uqaphele izinkambu ezinikwe amandla kanye nokuvuselelwa kanye nama-surcharges kuze kube manje. Ngemuva kwalokho, yenza inkokhelo ngokudlulisa noma ngefasitela lasebhange. Thumela kuHacienda ikhophi yenkokhelo.
Uma ingakhokhiwe esikhathini esibekiwe
Uma kwenzeka inkinga ukuthi awukhokhelanga ngesikhathi okweleta ngaso, kufanele uthathe ukubamba ku-inthanethi.
Faka inketho yokukhokha ebaluliwe bese ufaka ukugcwaliswa kwesitatimende. Ngemuva kwalokho kufanele ufake isikhathi lapho inkokhelo obekade uyikweleta ingenzwanga khona bese ukhetha inketho yesimemezelo eyengeziwe.
Manje khetha inketho yokuguqula izibopho bese uthatha isithombe-skrini samanani we-surcharges kanye nezibuyekezo ezizovela esikrinini.
Thumela imininingwane ku-hacienda futhi bazokuthumela imininingwane enosuku olusha lokukhokha kanye nemali entsha okufanele uyifake.
Ukuguqulwa kwedatha okuhlobene nokunqunywa kwentela noma ukukhokha
Kulokhu, kufanele ufake inkokhelo ebaluliwe ngaphakathi kuwebhu bese uthumela isitatimende. Ngemuva kwalokho, kufanele ufake ngaphakathi kwesimemezelo ukuthi uzokuguqula kanjani. Kufanele uye esigabeni sokunqunywa kwentela futhi iwebhu izosikhombisa ngokuzenzekelayo idatha egcwalisa isimemezelo sethu.
Zingaki izimemezelo ezengeziwe ezingenziwa?
Yize abantu bengenza kuze kube Izitatimende ezi-3 ezingezekile ngaphandle kwezinkinga, Kunezinhlobo ezithile zezimemezelo lapho isimemezelo esincomekayo singenziwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo.
Uma kwenzeka ukuthi isikhathi sokukhokha online siphelelwe yisikhathi futhi idatha yama-surcharges nezibuyekezo iyashintshwa.
Izimemezelo ezihambisanayo ezinikeza ukulungiswa kokukhokhwa noma umqondo wentela ngaphandle komphumela.
Imigqa efanayo, izimbuyiselo ezintathu eziphelele zingahanjiswa, inqobo nje uma zikhona ngaphakathi kwamacala alandelayo.
Lapho imali engenayo yomuntu noma inani lomsebenzi wakhe lenyuka.
Lapho ukulahlekelwa noma ukukhishwa komuntu kwehla noma kwehlisa amanani angahle akhokhwe noma izinkokhelo zesikhashana.
Uma kwenzeka umthetho udinga ukuthi umuntu afake isitatimende esisha esiguqula okwangempela.
Ngabe izimemezelo ezihambisanayo ziveza imbuyiselo?
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi ngabe yenza isimemezelo sokungezelela, Kungenzeka ukuthi intela ibuyise i-% bese impendulo inguyebo, inqobo nje uma imbuyiselo entsha izuzisa umuntu omemezelayo.
Lapho uku buyisela isicelo Kunamaphutha wezibalo kuphela ekunqunyweni kwenani eliceliwe, iziphathimandla zentela zizobuyisa amanani ahambisanayo, ngaphandle kwesidingo sokwethula isimemezelo esingezelelayo. Iziphathimandla zentela zingabuyisa imali ephansi kunaleyo ecelwe ngabakhokhi bentela ngenxa yokubuyekezwa okwenziwe kumadokhumenti anikeziwe. Kulokhu, isicelo sizothathwa njengesinqatshelwe iqembu elingabuyiswanga, ngaphandle kwalapho kuba khona amaphutha wezibalo noma wefomu.
Uma kwenzeka ukuthi iziphathimandla zentela zibuyisele isicelo sabakhokhi bentela, kuzobhekwa ukuthi senqatshwe ngokuphelele. Ngalezi zinhloso, iziphathimandla zentela kufanele zisungule futhi zigqugquzele izimbangela ezisekela ukwenqaba okuyingxenye noma okuphelele kwemali ebuyiswayo efanele.
Ngalezi zinhloso, siyabona ukuthi akudingekile uma kunephutha lokubalwa kwemali, kepha lokhu kuyinto engaze yenzeke.
Manje, kufanele futhi sikhumbule ukuthi umthetho uyasho ukuthi lapho a isikweletu sentela noma umnikelo woxhaso bese kwethulwa isimemezelo esihambisanayo lapho kuthiwe umnikelo uyancishiswa, kuzobuyiselwa imali kuphela kumkhokhi wentela uma inkokhelo yenziwe ngendlela efanele.
Lokho wukuthi, ungafinyelela ekubuyiselweni kwaleyo mali ngefa, kepha ngenxa yalokhu, intela kufanele ngabe ikhokhwe ngaphambi kwesikhathi. Uma inkokhelo ingakenziwa, kungenzeka ukuthi ukuyenza ngeke kubuyise lutho.
Inkokhelo Entsha Ebhekiselwe Yokuncoma Okuhambisanayo
Uma usuthumele noma isiphi isimemezelo esingeziwe ku-hacienda, uzothola ukwamukelwa kokutholwa lapho uzokwazi khona inani okufanele ulikhokhe noma olunye uhlobo lwesibopho osenalo.
Kulokhu kuvuma ungafunda umugqa okufanele kukhokhwe ngawo, inani eliphelele okumele likhokhwe nokuthi umnqamulajuqu wokukhokha uzoba yini.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Inqubomgomo yezimali » Isitatimende semali engenayo ehambisanayo
Ukunyuka kwentengo kagesi kuzothuthukisa izinkampani zikagesi